Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada London Heathrow ee ka imanaya Calgary ee WestJet hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Duulimaadyada London Heathrow ee ka imanaya Calgary ee WestJet hadda.
Jidka cusub ee WestJet si loo dardargeliyo soo kabashada dhaqaalaha Alberta oo loo kaxeeyo soo jiidashada maalgashiga ee ku xidhan xudunta caalamiga ah ee Heathrow ee London.
Waddada cusub ee WestJet ee aan joogsiga lahayn ee YYC ilaa London Heathrow, gegida dayuuradaha ee Yurub ee ugu mashquulka badan, waxa soo dhawaynaya kuwa raadinaya inay galaan xarunta ugu wayn ee dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo kuwa u heelan xidhiidh toos ah si ay u sahamiyaan dhaqanka iyo astaamaha London.
Heathrow waa marin muhiim u ah ganacsiyada iyo socdaalayaasha madadaalada waxayna faa'iido weyn u yeelan doontaa maalgashadayaasha iyo dalxiisayaasha.
Helitaanka hawadu waxay fure u tahay soo kabashada dhaqaalaha Alberta iyo kobaca warshadaha dalxiiska.
WestJet maanta waxay ku dhawaaqday inay ku dari doonto adeeg aan joogsi lahayn London Madaarka Heathrow (LHR) oo bilaabmaya horraanta gu'ga 2022. Iyadoo WestJet ay sii waddo kordhinta isku xidhka caalamiga ah ee Galbeedka Kanada, ku darida adeegga aan joogsiga lahayn ee u dhexeeya Calgary iyo London-Heathrow waxay calaamad u tahay kalsoonida soo kabashada ganacsiga iyo safarka firaaqada ee u dhexeeya labada goobood.
"Maadaama ay tahay shirkadda duulimaadyada ugu badan ee ka timaada Alberta, tani waa horumar muhiim ah oo soo kabasho ah anagoo sameynayna xiriir cusub oo ka dhexeeya Kanada iyo mid ka mid ah xarumaha loogu doonista badan yahay adduunka," ayuu yiri John Weatherill, WestJet Madaxa Ganacsiga. "Waxaan sii wadeynaa xoojinta shabakadeena, anagoo bixinayna fursado badan oo ganacsi iyo socdaalayaasha firaaqada ah iyo maalgashiyadan ayaa soo dedejin doona soo kabashada warshadeena iyadoo la hubinayo in Galbeedka Kanada ay dib uga soo kabato masiibada si ka badan sidii hore."
Iyadoo kalsoonida ganacsiga iyo safarka madadaalada ay sii kordheyso, WestJetDariiqa ugu cusub wuxuu ku shaqayn doonaa gu'ga diyaaradda 787 Dreamliner. Adeegga WestJet's 787 waxa ku jira Kaabka Ganacsiga ee diyaaradda oo ay ku jiraan kabo-beero-jiif ah, cunto ku-cunid baahi ah iyo xulashooyin sare oo Premium iyo Cabin Dhaqaalaha ah.
"Waxaa naga go'an ballaarinta xudunta caalamiga ah ee Calgary iyo taageeridda soo kabashada qaybo badan oo ku tiirsan safarka iyo dalxiiska," ayuu sii waday Weatherill. "Annaga oo ah diyaarad leh meelaha ugu badan ee Yurub ee aan joogsiga lahayn ee YYC, waxaan rajaynaynaa martida ka faa'iidaysanaysa doorashooyin badan iyo kordhinta isku xidhka u dhexeeya Kanada iyo UK."
Iyadoo dheeriga ah Heathrow Shabakadda WestJet guga, WestJet waxay ku xidhi doontaa Calgary ilaa 77 goobood oo aan joogsi lahayn sanadka oo dhan. WestJet waxay sidoo kale sii wadi doontaa bixinta duulimaadyada aan joogsiga lahayn ee u dhexeeya Calgary, Vancouver, Toronto iyo Halifax ilaa London, Gatwick.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan safarka u dhexeeya Calgary iyo London-Heathrow oo ay ku jiraan inta jeer, wakhtiga iyo qiimaha hordhaca ah ayaa la heli doonaa, iyo iib, toddobaadyada soo socda.